हिन्दी चलचित्र ‘द वेडिङ गेस्ट’ चलचित्रको सेक्स क्लिप्स सार्वजनिक - हिपत खबर
एजेन्सी, मुम्बई । बलिउड नायिका राधिका आप्टे अभिनित हिन्दी चलचित्र ‘द वेडिङ गेस्ट’ को एउटा क्लिप्स बाहिरिएको छ । राधिका र देव पट्टेल अभिनित सेक्स सिन सार्वजनिक भए लगत्तै धेरै राधिकाको नाम जोडेर टिप्पणी गरे ।
देव र आफु भएको भिडियोको सन्दर्भमा आफ्नो मात्रै नाम जोडिनुलाई राधिकाले बिमार मानसिकताको उपज भएको टिप्पणी गरिन् । ‘जुन दृष्य सार्वजनिक भएको छ त्यसमा देव पट्टेल र मैले अभिनय गरेका छौं ।
फिल्मको दृष्य सार्वजनिक भएर उनी चर्चामा आएको यो नै पहिलो पटक
भने होइन । सन २०१६ मा ‘पार्चड’मा आदिल हुसैनसंग सेक्स गरेको भिडियो सार्वजनिक हुँदा पनि उस्तै चर्चा भएको थियो । फिल्ममा आउनु अघि नै वाथरुमको सेल्फी सार्वजनिक गरेर चर्चामा आएकी थिईन् .
आइतबारदेखि राजधानीमा पाचौं व्यवस्थापन तथा आ.टि. शैक्षिक मेला